Waa maxay sababta oo markii aannu tirtirto waa files si joogto ah wuxuu ka ahaaday Eebeheen Computer?
Waxaa jira marar kala duwan dhaliyay in aad si ula kac ah tirto faylasha qaar ka your computer. Xaaladdan oo kale ah aad ku doonayso in ay iibiso PC, laga yaabee inaad la tirtiro faylasha aad xasaasi ah sababo asturnaanta iyo ammaanka. Mararka aad u tirtiri kartaa files si looga fogaado in lagu dhaco gacmaha dadka xaasidnimo, lammaanahaaga ama xitaa dadka kale ee soo galay. Waxaad tirtiri kartaa files yar muhiim ah in la abuuro meel dheeraad ah ama in la kordhiyo xawaaraha aad computer.
Ma suurogalbaa in ay tirtirto files si joogto ah ka computer?
Haa, faylasha aad tirtiray weli la soo kabsaday karo. Si joogto ah la tirtiro files ma dhab ahaan la joojiyo by faaruqinta Recycle Bin. Waxaa jira in ka badan in uu yahay. Mar kasta oo aad faaruqiso recycle bin, aad si fudud u soo guuraan xogta aad galay buugga cusub. Taas macnaheedu waa in xogta aad ka maqnaan doona ka bin recycle laakiin waxa lagu kaydin doonaa disk adag sida in la mar kale soo kabsaday karo.
Waxaa jira qalab kabashada xogta kala duwan oo loo isticmaali karo inuu ka soo kabsado files lumay ama la tirtiro ka bin recycle ay ka mid yihiin Wondershare Data Recovery, soo kabashada Card, software Recovery Recuva, Eygan Recovery iyo wixii la mid ah. Si kastaba ha ahaatee faylasha aad tirtiray aan la soo kabsaday karo by kuwaas software kabashada xogta haddii aad overwrite faylasha.
Siyaabaha la isu tirto faylasha ahaan iyo joogto on Windows
Waxaa jira dhowr siyood oo aad u isticmaali karto in si joogto ah tirto faylasha on Windows. Halkan waxaan ahay talada ka soo faaruqinta bin recycle tan iyo files weli la soo kabsaday karo. Oo weliba waxaad isticmaali kartaa wareeg + Delete. Hoos waxaa ku qoran siyaabo kala duwan si ay si joogto ah la soo gudbiyo ay hage tallaabo-tallaabo
Ahaan iyo joogto tirka files isticmaalaya Eraser
Marka hore, soo bixi Eraser u tirtirka joogtada ah ee files aad ka eryi adag. Waxaa jira versions free barnaamijkan. Marka aad soo bixi barnaamijka, rakibi iyo waxa maamula.
Step2. Dooro file aad rabto in aad tirtirto oo xaq click
File ka dooro ama fayl aad rabto in aad si joogto ah u tirtirto iyo xaq guji si aad u furtid wax daaqad cusub. Your computer aqoonsan doonto software cusub ee lagu rakibay ay ka mid yihiin Eraser sub-menu ku furan iyadoo ay xulashada.
Step3. Dooro masixi
Laga soo bilaabo Eraser-menu sub, doortaan masixi in ay gabi ahaanba tirtirto file ee la doortay ama folder. Geedi socodka waa in si degdeg ah oo pop up daaqad cusub muuqan doonaa ka dib markii habka dhamaato aad ogaysiinaya in aad file ama folder ayaa si ammaan ah oo si joogto ah la tirtiro ka drive adag.
On xulashada masixi on qeybtii doorasho, file ah oo aan la isla markiiba tirtiray laakiin waxaa laga tirtiri doonaa marka aad computerka aad.
Isticmaalka SDelete si joogto ah masixi files
Step1. Download iyo rakibi SDelete
Download iyo gashato SDelete si aad u computer. Marka lagu rakibay, ordo barnaamijka si ay u gudato si fuliyo hawlihiisa.
Step2. Amarka Open degdeg ah
Iyadoo ku Start menu, furo Run doorasho. Nooca Lauch garoonka nooca Open soo bandhigay oo guji OK .
Step3 Dul qalab SDelete
Inkasta oo uu weli ku degdeg ah amar, inayna meesha halka aad ku badbaadi SDelete isticmaalaya cd amarka. Tusaale ahaan, haddii aad ku badbaadi barnaamijka ee C: \_ downloads , ka dibna ku qor cd C: downloads \_ faylka nooca Open. Ka dib markii aad qortid amarka meesha, ku dhacay on gala muhiim ah in la sii wado.
File ama buugga Step4 Show in la tirtiro
Si ay u muujiyaan file aad rabto in aad la tirtiro, nooca sdelete. On the Jidka si aad u gudbiso ama buugga la eego , ku qor goobta saxda ah ee faylka aad rabto in aad la tirtiro.
Step5. Delete faylasha
Amarka muujinaya meesha uu faylasha aad dooratay lagu soo bandhigi doonaa shaashadda. Guudmar amarka iyo saxaafadda gala si ay awood SDelete in ay si joogto ah u tirtirto faylasha soo xulay.
Siyaabaha la isu tirtirto files si buuxda oo joogto ah oo ku saabsan Mac
Si joogto ah u tirtira ee files isticmaalaya Eraser
Download barnaamijka Eraser ee ku aadan ikhtiyaarka Mac oo ku xidh on your computer. Marka aad soo dajiyo, abuurtaan barnaamijka iyo dhaqaaqo tallaabada xigta.
Step2. Jiid oo hoos u files gal Eraser
Waxaad kartaa jiita iyo hoos u files ama la gooyaa oo paste files si ay icon Eraser aad rabto inaad tirtirto ka. Marka aad sii daayo file ah, barnaamijka Eraser isla markiiba bilaabi doonaan in ay ka tirtiri files ka disk adag.
Step3. Masixi faylasha aad
Fur Eraser joogtada ah si aad u bilowdo barnaamijka. Digniin lagu soo bandhigi doonaa, weydiinaya in aad si loo xaqiijiyo in aad rabto in aad tirto faylasha ah si joogto ah. Riix OK si aad u xaqiijiso falalka. Dhammaan files hoos u gal icon Eraser in si joogto ah la tirtiro doonaa.
Line hoose ee, dadka isticmaala inta badan kuwo jaahil ka ah xaqiiqda ah in faaruqinta bin recycle ku on your computer ma si joogto ah tirto faylasha. Ma aha ilaa files ay xasaasi ah ka waddaa gacmaha shaqsiyaad xaasidnimo ah in ay bilaabaan cabsi gelin. Waxaa jira siyaabo fiican in ay tirtirto faylasha aad si buuxda oo joogto ah (iyadoon loo eegayn nooca computer aad isticmaasho) oo aan ahayn oo kaliya inay faaruqdo Recycle Bin.
> Resource > masixi > Sida loo joogto ah tirto faylasha ka Windows iyo Mac